Zava-dehibe iray hafa koa dia ity: “Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin’ny maizina, dia mandainga isika, ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika1” (1 Jaona 1. 6-7).
Inona no lazain’ny Tenin’Andriamanitra momba izany? Izao no vakiantsika ao amin’ny Levitikosy 5. 23-26: “Satria nanota izy ka meloka, dia hanonitra izay nalainy an-keriny ... sady hanampy azy koa ho tonga avy fahenina2... Ary ny fanati-panonerana hoentiny ho an’i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema ... ho fanati-panorenana ho any amin’ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy eo anatrehan’i Jehovah, dia havela ny helony.”
1 Dikanteny DIEM: “dia misy fiombonana amintsika samy isika”.
2 Dikanteny DIEM: “sady hampiany ny ampahadimin-tombany”.